जसपा अब बाबुराम -उपेन्द्रको : महन्थ-राजेन्द्रले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने ! - Kantipath.com
जसपा अब बाबुराम -उपेन्द्रको : महन्थ-राजेन्द्रले नयाँ दल दर्ता गर्नुपर्ने !
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई दल दर्ताको अवसर दिएर आधिकारीकता भने उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने इजलासले निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको मागबमोजिम आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अर्का अध्यक्ष यादव पक्षलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता दिएको हो ।
५१ सदस्सीय जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा यादवको पक्षमा ३४ जनाले आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गरेका थिए । यस्तै, महन्थ ठाकुरका पक्षमा १६ जना सदस्यले समर्थन गरेका थिए । निलम्बित सांसदसमेत रहेका जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी भने तटस्थ बसेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाएको जसपाको यादव पक्ष निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाएसँगै अब सरकारमा जानेछ ।
Previous Previous post: महेश बस्नेतले भने : असल संस्कारयुक्त परिवारमा हुर्केको मान्छे हुँ
Next Next post: उपेन्द्रको जसपामा राज : महन्थको पुर्पुरोमा हात !
प्रधानमन्त्रीमा खड्क प्रसाद ओलीको पनि दाबी